दशरथ रंगशालामा विश्वकप छनोटको खेल नहुने ! - सबै खेल
दशरथ रंगशालामा विश्वकप छनोटको खेल नहुने !
१७ श्रावण २०७७, शनिबार ०१:०० August 1, 20200Comments
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको विश्वकप र एसिया कप फुटबल प्रतियोगिताको छनोट चरणका तीन नहुने सम्भावना बढेको छ । कोरोना महामारीका कारण विश्वकप छनोटका बाँकी रहेका खेलहरु होम एण्ड अवेका आधारमा हुने सम्भावना भएपनि दशरथ रंगशालमा हुने भनिएका तीन नहुने सम्भावना बढेको हो।
विश्वकप र एसिया कपको छनोटका (एक समूहका) बाँकी खेल सम्बन्धित एक देशमा मात्र गर्ने वा तेस्रो देशमा गर्ने भन्र्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले नेपालले विश्वकप छनोटका खेल घरेलु मैदानमा खेल्ने सम्भावना न्यून भएको हो ।
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम ८ का खेल एक देशमा मात्र गर्ने निर्णय भएको अवस्थामा विश्वकप छनोटका खेलहरु पनि एकै देशमा गर्ने प्रस्ताव आएको हो । विश्वकप छनोटका बाँकी खेलहरु सम्बन्धित समूहको एक देश वा तेस्रो देशमा गर्दा उपयुुक्त हुने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । क्वारेन्टिनको नियम पालना गर्दा एक सातामा होम एन्ड अवे म्याच सम्भव नहुने तर्क छ।
कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएका विश्वकप छनोटका खेलाडहरु अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउने एएफसीले तयारी गरेको छ। एएफसीले स्थागित खेलहरु अक्टोबर ८ र १३ तथा नोभेम्बर १२ र १७ गर्ने तालिका सर्वाजनिक गरिसकेको छ।
सोही अनुसार विश्वकप छनोटको समूह बीमा रहेको नेपालले अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपेइ र जोडर्नसँग दशरथ रंगशालामा खेल्ने तय भएको थियो । नेपालले घरेलु अक्टोबर ८ मा चाइनिज ताइपेई, अक्टोबर १३ मा अष्ट्रेलिया र नोभेम्बर १२ मा जोर्डनसँग खेल्ने तालिका छ । तर, विश्वकप छनोटको नयाँ प्रस्तावपछि तीनवटै खेल नेपालमा नहुने सम्भावना बढेको छ । दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण नसकिँदा नेपालले कुवेतसँगको होम खेल भुटानमा खेलेको थियो ।
नयाँ प्रस्तावमा फिफा तथा एएफसीले निर्णय गरे समूह ‘बी’मा रहेको नेपालले पनि आयोजना दाबी गर्न सक्छ । किनकी नेपालले बाँकी तीनै खेल घरेलु मैदानमा खेल्न बाँकी छ । तर, पर्याप्त अभ्यास मैदान तथा खेल मैदान अभाव र कोरोना संक्रमित बढिरहेकाले नेपालले आयोजना गर्न पाउने सम्भवना कम छ ।
समूह ‘बी’मा अब आठ खेल खेल्न बाँकी छ । नेपालको समूहमा रहेको अस्ट्रेलियाले पनि बाँकी चार मध्ये तीन खेल घरेलुु मैदानमा खेल्न बाँकी छ । जसकारण अस्ट्रेलियाले पनि बाँकी खेलको आयोजनाको दाबी गर्न सक्छ ।
समूहका अन्य टिम कुबेत र चाइनिज ताइपेइको तीन मध्ये १–१ खेल मात्र घरेलु मैदानमा हुने तय छ। जोर्डनको भने बाँकी तीनै खेल अवे रहेका छन् । नेपाल र अस्ट्रेलिया बाहेक समूहका अन्य तीन देश वा तेस्रो देशमा पनि खेल हुने सम्भावना छ।
सन् २०२२ को विश्वकप र सन् २०२३ को एसियन कप छनोटमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपाल रहेको समूहमा अष्ट्रेलिया, जोर्डन, कुवेत र चाइनिज ताइपेई छन् । नेपालले छनोटका ५ खेल खेलिसकेको छ, जसमा नेपालले एकमा जित र चार खेलमा पराजित भएको छ।
विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई उसकै मैदानमा २–० ले हराएको थियो भने कुवेतसँग ७–० ले, अष्ट्रेलियासँग ५–० र जोडर्नसँग ३–० ले पराजित भएको थियो । भुटानमा भएको खेलमा नेपाल कुवतेसँग १–० ले पराजित भएको थियो।
← सुपर लिगको पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्ड विजयी
कोहलीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै मद्रास उच्च अदालतमा मुद्दा →
कोलम्बियालाई हराउँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन चिली अन्तिम ४ मा
१४ असार २०७६, शनिबार १५:४० 0
एम्बाप्पे चम्किँदा पिएसजी विजयी, नेमार पेनाल्टीमा चुके
३० मंसिर २०७६, सोमबार १४:३४ 0
तलब कटौतीमा असन्तुष्ट लाम्पार्टले भने, फुटबलमा राजनीति मिसाइयो
२ बैशाख २०७७, मंगलवार १५:३६ 0